एमाले बाँकेको बैजनाथमा संकटमा साथी र पार्टी अभियान
सोमबार, जेष्ठ ३, २०७८ साल
नेपालगञ्ज, जेठ ३ । नेकपा एमाले बाँकेले संकटमा साथी र पार्टी अभियान सुरुवात गरेको छ । बैजनाथ गाउँपालिका कमिटीले पार्टी नेताहरु दलवहादुर सुनार, अशोक कोइराला, रत्न खत्री, गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानवहादुर..
बाँकेमा फेरी बढाइयो निषेधाज्ञा
नेपालगञ्ज, जेठ ३ गते । बाँकेमा जारी निषेधाज्ञा एकसाता थप भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार अब जेठ १० गते राती १२ बजेसम्म निषेधाज्ञाको आदेश कायम रहनेछ । नेपालगञ्जमा..
कोभिडका विरामीलाई सहुलियतमा खाना खुवाउँदै एमाले बाँके
शनिबार, जेष्ठ १, २०७८ साल
नेपालगञ्ज, जेठ १ । नेकपा एमाले बाँकेले शनिबारदेखि शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचाररत विरामी र उनीहरुका कुरुवालाई लक्षित गरि सहुलियतदरमा खाना खुवाउने कार्य सुरुवात गरेको छ । कोभिड–१९ लाई लक्षित गर्दै..
भोलीदेखि एमाले बाँकेले भान्साघर चलाउँदै
शुक्रबार, बैशाख ३१, २०७८ साल
नेपालगञ्ज, बैशाख ३१ । नेकपा एमाले बाँकेले कोभिड संक्रमण भई उपचाररत विरामी र उनीहरुका कुरुवाका लागि लक्षित गरि भान्सा घर सञ्चालन गर्दैछ । जेठ १ गते विहान ८ बजेदेखि शिक्षण..
व्यवसायी सिंह जो अस्पतालमा खाना खुवाउन दिनरात खटिन्छन
नेपालगञ्ज, बैशाख ३१ । जितेन्द्रकुमार सिंह नेपालगञ्जका ब्यवसायी हुनुहुन्छ । तर उहाँको दैनिकी भने अरु ब्यवसायीको भन्दा फरक छ । उहाँलाई पछिल्लो समय अधिकाँश समय भेरी अस्पताल परिसरमा भेट्न सकिन्छ..
पत्रकार महासंघ बाँकेले एम्बुलेन्स खरिद गर्ने
नेपालगञ्ज, बैशाख ३१ । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले पत्रकार लगायत आम सर्वसाधारणको सहज प्रयोगका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने भएको छ । महासंघका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले..
विरामीलाई खाना खुवाउन डा. योगीको सहयोग
बिहीवार, बैशाख ३०, २०७८ साल
नेपालगञ्ज, बैशाख ३० । बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डा. प्रविण योगीले भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा खाना खुवाईरहेको अञ्जनी माता रसोई श्री सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डल परिवारलाई आर्थिक..
प्रहरीको दादागिरी,भेरीमा रेम्सिडिभिर रोकियो ।
बुद्धबार, बैशाख २९, २०७८ साल
नेपालगन्ज,बैशाख २९ । भेरी अस्पताल नेपालगन्जले कोरोना बिरामीका लागि आवश्यक रेम्सिडिभिर इन्जेक्सन उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ । भेरी अस्पतालमा उपचाररत ३० बढी बिरामिले यो इन्जेक्सन लगाउदै आएका छन ।..
नेपालगञ्ज १४ मा घरघरमा स्वास्थ्य परामर्श
नेपालगञ्ज, बैशाख २८ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १४ ले कोभिड संक्रमण भई घरमै आईसोलेसनमा बसेकाहरुका लागि स्वास्थ्यकर्मीसहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । वडा अध्यक्ष ओमकारनाथ मिश्राको..
नेपालगञ्ज १३ मा संक्रमितको घरमा डाक्टरसहित पुग्छन वडा अध्यक्ष शाह
नेपालगञ्ज, बैशाख २८ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १३ ले कोभिड संक्रमण भई घरमै आईसोलेसनमा बसेकाहरुका लागि चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । वडा अध्यक्ष विरेन्द्रबहादुर शाहको..
सोमबार, बैशाख २७, २०७८ साल
नेपालगञ्ज, बैशाख २७ । कशौधन बैश्य समाज अन्तर्गतको युवा मञ्चले नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका लागि मेडिकल सामग्री सहयोग गरेको छ । समाजका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यको अगुवाईमा सोमबार नगर प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणालाई..
भेरीमा खाना खुवाउन नेपालगञ्जले सहयोग गर्ने
सोमबार, बैशाख २०, २०७८ साल
नेपालगञ्ज, बैशाख २० गते । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचाररत कोभिड संक्रमित र अन्य विरामीका कुरुवालाई लक्षित गर्दै सञ्चालित अञ्जनी माता रसोईलाई नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाले मासिक एकलाख ५० हजार रुपियाँ सहयोग गर्ने..
कोहलपुरमा बस र टिप्पर ठोक्कियो,५ को मृत्यु
शुक्रबार, बैशाख ३, २०७८ साल
नेपालगन्ज,बैशाख ३ । पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका रोहिनी खोलानजिकै बस र ट्रक एकआपसमा ठोक्किदा ५ जनाको निधन भएको छ । दुर्घटनामा ३० बढी घाइते भएका छन् ..
कानून निर्माणका लागि प्रशिक्षण
नेपालगञ्ज, बैशाख ३ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुका लागि स्थानीय तहमा कानून निर्माण विषयमा प्रशिक्षण दिन थालिएको छ । जिआईजेडको प्राविधिक सहयोग तथा नेपाल कानून समाजको सहयोगमा शुक्रबारदेखि ३..
नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकामा रेग्मी
नेपालगञ्ज, बैशाख ३ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सहसचिव हिरालाल रेग्मी सरुवा भई आउनुभएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीलाई शुक्रबार नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिाकामा स्वागत गरिएको छ । सुदुरपश्चिम..
बिहीवार, बैशाख २, २०७८ साल
नेपालगञ्ज, बैशाख २ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकामा एकहप्ता शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका विपद् ब्यवस्थापन समितिको बिहिबार बसेको बैठकले एकसाताका लागि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्ने..
नेपालगञ्ज १५ ले किसानलाई सहयोग गर्दै
आईतवार, चैत्र २९, २०७७ साल
बाँके,चैत २९ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १५ ले किसानहरुलाई समूह बनाएर खेती गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । वडा अध्यक्ष ओमकारनाथ मिश्राले वडामा १० वटा कृषि समूह रहेको जानकारी दिनुभयो..
नेपालगञ्जमा स्वमुल्यांकन प्रशिक्षण
नेपालगञ्ज, चैत २९ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाको आयोजनामा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रशिक्षण कार्यक्रम नेपालगञ्जस्थित उप–महानगरपालिकाको तालिम केन्द्रमा आईतबार समापन भएको छ । प्रशिक्षण कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन..
आर्य सेवा समाज बाँकेको सहभोज कार्यक्रम
आईतवार, चैत्र २२, २०७७ साल
नेपालगञ्ज, चैत २२ । आर्य (धोबी ) सेवा समाज बाँकेले शनिबार नेपालगंजमा होली मिलन तथा सहभोज कार्यक्रम गरेको छ । समाजका अध्यक्ष पवन कुमार कनौजियाको अध्यक्षता तथा प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय..
सिम्ताली एकता समाजमा मल्लको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति
नेपालगञ्ज, चैत २२ । सिम्ताली एकता समाज बाँकेले संगठन विस्तारमा तिव्रता दिने भएको छ । समाज सुर्खेतको सिम्तामा पुख्र्यौली थलो भई बाँकेमा बसोबास गरिरहेकाहरुको संगठन हो । समाजको शनिबार कोहलपुरमा..
आगलागीमा परि एकसय घर जले
शनिबार, चैत्र २१, २०७७ साल
नेपालगन्ज, चैत २१ । बाँकेको नरैनापुर ४ खोदवामा शनिबार भएको आगलागीमा एकसय घर जलेर नस्ट भएका छन् । आगलागिमा तिन जना ब्यक्ति घाइते भएका छन । सेना ,सशस्त्र..
नेपालगञ्जमा स्थानीय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा
शुक्रबार, चैत्र २०, २०७७ साल
नेपालगञ्ज, चैत २० । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाले स्थानीय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । नगर प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणा, उपप्रमुख उमा थापा मगर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमवहादुर खड्काले शुक्रबार..
लकडाउन अवधीको शुल्क नलिन अखिलको माग
बुद्धबार, चैत्र १८, २०७७ साल
नेपालगञ्ज, चैत १८ । अनेरास्ववियु बाँकेले बन्दाबन्दीको समयमा विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट शुल्क लिइएको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अनेरास्ववियु बाँकेका संयोजक टेकेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा बुधबार शिक्षा विकास तथा समन्वय..
नेपालगञ्जलाई वालमैत्री वडा घोषणाको तयारी
नेपालगञ्ज, चैत १८ गते । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका सबै २३ वटै वडालाई वालविवाह मुक्त वडा घोषणाका लागि तयारी सुरु गरिएको छ । नगर उपप्रमुख उमा थापा मगरको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको वाल..
स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई किशोरी किशोर मैत्री सेवा सम्बन्धि तालिम
शनिबार, चैत्र १४, २०७७ साल
बर्दिया चैत १४ । प्लान ईन्टरनेशनल नेपाल र भेरी वातावरणीय विशिष्टता समुह (बि ग्रुप) बाँके को साझेदारीमा सञ्चालित बालीका तथा युवा शसक्तिकरण (नेतृत्व र निर्णय) परियोजना स्वास्थ्यकमीहरुलाई लाञ्छना रहित यौन..
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङको पहलमा सामुहिक नागरिकता
शुक्रबार, चैत्र १३, २०७७ साल
नेपालगञ्ज, चैत १३ गते । बाँकेको राप्ती–सोनारी गाउँपालिकाको विनौना र वैजापुर थारु वाहुल्य क्षेत्र हो । यहाँबाट सदरमुकाम नेपालगञ्ज आएर नागरिकता दिन महंगो भाडा र करिब दुईदिन समय खर्च हुन्छ..
समाज जागरण साप्ताहिकको १३ औं वार्षिकउत्सव मनाइयो
बिहीवार, चैत्र १२, २०७७ साल
नेपालगन्ज, १२ चैत – समाज जागरण साप्ताहिक पत्रिकाले आफ्नो १३ औं वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ । समाज जागरण साप्ताहिकको १३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका..
नेपालगञ्ज ५ का वडा अध्यक्ष कैफुलवरा जोलाह कुटिए
नेपालगञ्ज, चैत १२ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष कैफुलवरा जोलाहलाई बिहिवार दिउसो कार्यकक्षमै कुटिनुभएको छ । जोलाहलाई केही ब्यक्तिहरुले कार्यकक्षमै कुटपिट र हातपात गरेको नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका..
१२ किलो चरेससहित २ पक्राउ
१२ किलो चरेससहित २ पक्राउ नेपालगञ्ज, चैत १२ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले ठुलो परिमाणको चरेस सहित २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । १२ किलो चरेशसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । १२..
जबरजस्ती करणी गर्ने बुढा पक्राउ
बाँके, चैत १२ गते । लागु औषध सेवन गराई युवतीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने युवकलाई पक्राउ गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार घटना विवरण निम्न अनुसारको छ । लागु औषध खुवाई जबरजस्ती करणी..
Results 1369: You are at page3of 46